Jeremaya 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
12 Jehova, ị bụ onye ezi omume+ mgbe m meere gị mkpesa, ee, mgbe m gwara gị okwu banyere ikpe. Gịnị mere ụzọ ndị ajọ omume ji na-agazi agazi,+ gịnị mere ndị niile na-aghọ aghụghọ ji bụrụ ndị na-enweghị nchegbu? 2 Ị kụwo ha dị ka osisi; ha agbawokwa mgbọrọgwụ. Ha na-aga n’ihu; ha amịwokwa mkpụrụ. Ị nọ nso n’ọnụ ha, ma obi* ha dị anya n’ebe ị nọ.+ 3 Jehova, gị onwe gị maara m nke ọma;+ ị na-ahụ m, i nyochawokwa obi m wee hụ na obi m dị n’ebe ị nọ.+ Họpụta ha dị ka atụrụ a ga-egbu egbu,+ debe ha iche maka ụbọchị a ga-egbu ha. 4 Ruo ole mgbe ka ala a ga-anọ na-akpọ nkụ,+ ruokwa ole mgbe ka ahịhịa dị n’ala dum ga-anọ na-akpọnwụ?+ E kpochapụwo anụmanụ na anụ ufe n’ihi ihe ọjọọ ndị bi na ya na-eme.+ N’ihi na ha asịwo: “Ọ dịghị ahụ ọdịnihu anyị.” 5 Ebe ọ bụ na i so ndị ji ụkwụ gbaa ọsọ, ha wee mee ka ike gwụ gị, oleezi otú ị ga-esi soro ịnyịnya gbaa ọsọ?+ Ọ̀ bụ n’ala udo dị ka ị nọ tụsara ahụ́?+ Gịnịzi ka ị ga-eme mgbe ị ga-anọ n’etiti obere ọhịa tojuru etoju nke dị n’akụkụ Jọdan?+ 6 N’ihi na ọbụna ụmụnne gị na ezinụlọ nna gị, ee, ha onwe ha ghọrọ gị aghụghọ.+ Ọbụna ha onwe ha ji oké olu tie mkpu n’azụ gị. Atụkwasịla ha obi naanị n’ihi na ha na-agwa gị okwu ọma.+ 7 “Ahapụwo m ụlọ m;+ agbahapụwo m ihe nketa m;+ Enyefewo m onye mkpụrụ obi m hụrụ n’anya n’ọbụ aka ndị iro ya.+ 8 Ihe nketa m dị m ka ọdụm nọ n’oké ọhịa. Ọ na-ebigbọ m. Ọ bụ ya mere m ji kpọ ya asị.+ 9 Ihe nketa m+ dị m ka nnụnụ na-eri anụ nke tụrụ àgwà; nnụnụ ndị na-eri anụ gbara ya gburugburu.+ Bịanụ, zukọtanụ, unu anụ niile nọ n’ọhịa; kpọtanụ ha ka ha rie anụ.+ 10 Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ+ alawo ubi vaịn m n’iyi;+ ha azọdawo òkè m.+ Ha emewo ka òkè m nke bụ́ ihe a na-achọsi ike+ bụrụ ala ịkpa nke tọgbọrọ n’efu. 11 E mewo ka ọ bụrụ ebe tọgbọrọ n’efu;+ ọ kpọnwụọla; e mewo ka ọ ghọọrọ m ebe tọgbọrọ n’efu.+ E mewo ka ala a dum tọgbọrọ n’efu, n’ihi na ọ dịghị onye ọ na-emetụ n’obi.+ 12 Ndị na-ebukọrọ ihe mmadụ esiwo n’ụzọ e ji ụkwụ waa n’ala ịkpa bịa. N’ihi na mma agha Jehova na-eripịa ala a, malite n’otu nsọtụ ruo na nsọtụ nke ọzọ.+ Udo adịrịghị anụ ahụ́ ọ bụla. 13 Ha ghara ọka wit, ma, ọ bụ ogwu ka ha ghọtara.+ Ha arụtaworo onwe ha ọrịa; ọ gaghị abara ha uru.+ Ihere ihe ha rụpụtara ga-eme ha n’ihi iwe dị ọkụ nke Jehova.” 14 Nke a bụ ihe Jehova kwuru megide ndị agbata obi m niile bụ́ ndị ọjọọ,+ ndị na-emetụ ihe nketa nke m mere ka ndị m, bụ́ Izrel, nweta, aka:+ “Lee, m ga-efopụ ha n’ala ha;+ m ga-efopụkwa ụlọ Juda n’etiti ha.+ 15 Ọ ga-erukwa na mgbe m fopụchara ha, m ga-emere ha ebere+ wee kpọghachite onye nke ọ bụla n’ihe nketa ya, kpọghachitekwa onye nke ọ bụla n’ala ya.”+ 16 “Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ha amụta ụzọ ndị m wee jiri aha m na-aṅụ iyi,+ sị, ‘Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ!’ dị ka ha kụziiri ndị m iji Bel na-aṅụ iyi,+ a ga-eme ka ha kwụsie ike n’etiti ndị m.+ 17 Ma ọ bụrụ na ha erubeghị isi, m ga-efopụkwa mba ahụ, fopụ ya ma bibie ya,”+ ka Jehova kwuru.
Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “akụrụ.”